Ungalwakha Kanjani Ulimi Lwakho Ku-Morse Code Translator | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Namuhla sibuya nesinye sezifundo zethu ezithokozisayo. Ngalesi sikhathi ngifuna ukukukhombisa iphrojekthi elula kakhulu ezokuthatha isikhathi esifushane ukuyisebenzisa futhi lapho uzokwazi khona ukwakha uhlobo lomhumushi olusuka olimini olubhalelwe ikhodi ye-Morse. Njengokwejwayelekile, iqiniso ukuthi ngeke sidlule iphrojekthi lapho i-a ipuleti lesinkwa futhi a ibhodi ye-arduino Njengoba, uma kwenzeka ufuna ukuqhubekela phambili, zombili ezingeni lesoftware nangokuya ngamaphrojekthi wokugcina, kufanele kube nguwe osebenzisa isisombululo, okuncane, nokukhangayo.
Umqondo uqala ekudaleni ifayela le- Umhumushi wanoma yiluphi uhlobo lwefonti, amagama noma ibinzana lekhodi ye-morse. Lokhu kulula njengokusebenzisa ibhodi ye-Arduino okuzoba yiyo ene-software edingekayo elayishiwe ukuze, ngemiphumela yayo, sikwazi ukwenza ama-LED ambalwa abukeke ngokwencazelo ngolimi lwesiMorse esizwakalayo. Ukubhala kalula umbhalo esifuna ukuwuhumusha, sizosebenzisa iselula ephethe uhlelo lokusebenza lwe-Android oluzothumela umbhalo ngoxhumano lwe-bluetooth ebhodini lethu. Arduino UNO.
1 Izinto ezidingekayo ukufeza iphrojekthi
2 Izinyathelo zokwenza iphrojekthi
3 Ukuxhumana phakathi kwebhodi le-Arduino nekhompyutha
Izinto ezidingekayo ukufeza iphrojekthi
Njengoba sizame kancane ukukhombisa emigqeni engenhla, ukwenza le phrojekthi sizodinga okokusebenza okuthile noma, uma uthanda umhlaba Umenzi, Ngiyaqiniseka ukuthi noma ngabe ngeke kube nzima kuwe ukuthola lokho okushodayo kunoma yisiphi isitolo sakho esivame kakhulu uma kwenzeka ungenakho yize, njengoba ngisho, kuvamisile izinto ezisetshenziswa njalo. Ngokuqondile, kuzodingeka sibe nohlu olulandelayo:
Amalambu amane e-LED, ama-3 anombala ofanayo nokukhanya kwesine kombala ohlukile
Izintambo eziningana zokwenza lula ukuxhumana phakathi kwamadivayisi, kulokhu ukuxhuma i-breadboard nesilawuli sethu se-Arduino
Ikhebula lokuxhuma i-Ardunio kokufaka kwe-USB ukuze ulande isoftware
Ikhompyutha ene-Arduino IDE efakwe kahle futhi Ukuxhumeka kwe-USB ukuxhuma ibhodi
Idivayisi yeselula ene-operating system I-Android 2.2.1 noma ngaphezulu
Lapho nje sesinazo zonke izinto ezidingekayo, singaqhubeka nokwenza iphrojekthi. Iphuzu elilodwa okufanele ulikhumbule yilokho ngokoqobo akudingekile ukuthi kusetshenziswe i-adaptha ye-bluetooth kule phrojekthi noma ikhadi Arduino UNO njengoba kunjalo ngoba noma yikuphi okunye okunokuxhumana okuyisisekelo kungasetshenziswa, kuzodingeka sinake kuphela ukuxhumana okusetshenzisiwe ukuze, ngokwesibonelo, esimweni lapho ukukhishwa kwedijithali kwe-13 yethu Arduino UNO lokhu kufana nokukhishwa okufanayo kwebhodi olisebenzisayo.
Izinyathelo zokwenza iphrojekthi
Ukwenza le phrojekthi, ngezansi, ngizokhombisa uchungechunge lwezinyathelo ezihlobene nomhlangano nokuxhuma kwazo zonke izinto ezakha uhlu lwangaphambilini okufanele silulandele ukwenziwa kwazo okulungile. Njengoba kwenzeka kaningi kulolu hlobo lwephrojekthi, zizwe ukhululeke ngokuphelele ukwenza shintsha noma yimuphi umugqa wekhodi noma ungeze i-Hardware ukuze iguquke futhi isebenze kahle ukusebenza kwayo ngoba noma yiluphi uhlobo lokuthuthuka lwamukelekile ngaso sonke isikhathi.
Okokuqala sizokwenza umsebenzi we ukuxhumeka kwe- Arduino UNO nebhodi lethu lesinkwa. Ngokuqondile, imiphumela esetshenzisiwe kuzoba yi-GND no-3.3 V. Le migqa efanayo izosizakala, phakathi kwezinye izinto, ukunikeza amandla i-adaptha yethu ye-Bluetooth.
Lapho sesikwenzile lokhu kuxhumana, sekuyisikhathi sokuxhumanisa ukufaka kwedatha nokukhipha kwe-adaptha ye-bluetooth ngemiphumela yedatha yedijithali nemiphumela yebhodi le-Arduino. Ngale ndlela sizoba ne-adaptha yethu exhunywe ngokuphelele ekhadini zombili ukuze ithole eyamanje nokuthi itholakale ngokuphelele ezingeni lobuchwepheshe ukuze ikwazi ukuqala 'lalelaidatha efinyelela kuyo ngamachweba wokungena kwe- Arduino UNO. Ngokuningiliziwe, ngikutshele ukuthi ngezikhathi ezithile, ngenxa yekhadi esilisebenzisayo ne-adaptha ye-bluetooth, ukuxhumana okusetshenziswayo kungahluka ngakho, okwamanje, into enhle kakhulu ukuthi bheka imibhalo yokufaka i-adaptha njengoba imvamisa ihambisana nemidwebo yokuxhuma.
Sifika ku 3 volt uphondo uxhumano. Kulokhu sizosebenzisa inombolo yokukhishwa kwedijithali engu-13 ka- Arduino UNO. Ukuxhumeka okusele, njengenjwayelo, kufanele sikuxhume ku-GND noma emhlabathini ukuze ukusebenza kophondo kube okulungile.
Manje kufika isikhathi xhuma ama-LED ahlukene. Ukuze ungazami ukudideka, akutshele ukuthi umqondo ngukuxhuma umlenze omude kunayo yonke, omuhle, komunye wemiphumela edijithali Arduino UNO ngenkathi emfushane ixhuma ngqo ku-GND noma emhlabathini. Ngale ndlela sizothola ukuthi ama-LED okuqala aluhlaza azoxhunyaniswa nokukhishwa kwedijithali okungu-12, okulandelayo okukhipha okungu-8, okwesithathu okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhipha u-7 ngenkathi okuwukuphela kwe-LED eluhlaza okwesibhakabhaka kuzoxhunywa ku-digital 4 ekhishwayo.
Isinyathelo sokugcina, uma sesiyilungiselele yonke intambo sebenzisa ikhebula lokuxhuma le-USB ukuxhuma yethu Arduino UNO kukhompyutha futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukuyihlinzeka ngesoftware edingekayo, esizoyibhala siyihlanganise kusuka ku-Arduino IDE.
Ukuxhumana phakathi kwebhodi le-Arduino nekhompyutha
Iphuzu elilodwa okufanele linakwe uma ibhodi ixhunywe kwikhompyutha ukwazi ukuthi konke kusebenza ngokufanele, okungenani ngokomthetho, ukuthi ibhodi lizoba ukukhanya okuluhlaza okuvuliwe ngaso sonke isikhathi inqobo nje uma ihlala ixhunywe kwikhompyutha. Ngakolunye uhlangothi futhi kuya nge-adaptha ye-Bluetooth esiyisebenzisayo, lokhu imvamisa iba nokukhanya okubomvu okukhanyayo ngenxa yokuxhuma okungasungulwa nedivayisi ye-Android esizoyisebenzisa ukuthumela izinhlamvu, amabinzana noma amagama kupuleti.
Ngiyazi ukuthi imininingwane engenhla ingabonakala ngathi yinto ethile kakhulu 'tonto'kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi zisebenza kahle, ziyadingeka futhi ziyizinkomba ezithokozisayo uma sinaka ukuthi emphakathini wabenzi zingaba khona abantu abaqala nokuthi, sibonga laba abancane 'tricks'bangaqonda ukuthi, okungenani, i-current ifinyelela kokubili i-adaptha nebhodi uqobo.
Okwamanje kufanele silande uhlelo lokusebenza UMORSE.apk okunamathiselwe. Lolu hlelo lokusebenza kufanele lufakwe kudivayisi yakho ephathekayo enesistimu yokusebenza ye-Android. Uma sekufakiwe, kufanele uvule uhlelo lokusebenza bese ucindezela ukuqhubeka. Okwamanje inketho esiyithandayo kakhulu yile 'Thumela umbhalo', efanayo lapho kufanele sichofoze ukuyifinyelela. Uma sesingaphakathi kufanele sichofoze ku-'Xhuma 'ukuthola ukuxhumana nepuleti lethu.
Inqubo yokufaka ikhodi elandelwe imi kanje.
Lapho usuthole uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho ye-Android bese ulandela izinyathelo zangaphambilini, uzokwazi ukubhala noma iyiphi incwadi, igama noma ibinzana. Lapho usubhalile okufunayo, kufanele uchofoze ku- send.
Uma umbhalo utholwe kahle uhlelo luzovula izibani ngokuzenzakalela futhi likhiphe umsindo
Umqondo ngukuthi isibani sokuqala esiluhlaza sizoqhubeka sicime ukuthola 'iphuzu'. Ngokulandelayo, uphondo luzokhala futhi luvimbe ngasikhathi sinye.
Amalambu aluhlaza wesibili nawesithathu azokhanyisa avule ukucacisa 'ulayini' ngokulandelana. Uphondo, njengasesimweni esedlule, luzocima futhi luvimbe ngasikhathi sinye.
Ekugcineni isibani sesine, okungukuthi, ilambu eliluhlaza okwesibhakabhaka, sizokhanyisa sicime ukucacisa ukuphela komlingiswa, igama noma ibinzana. Uma kukhona uhlobo lwesikhala phakathi komlingiswa ngamunye, igama noma ibinzana, lokhu kukhanya kuzocima kuvulwe kabili.
Njengamaphoyinti okufanele ucatshangelwe, vele utshele ukuthi kulokhu uhlelo lwe-Android lwenziwe ngenxa ye-App Inventor, indlela elula yokwenza ikhodi nokwakhiwa kohlelo lokusebenza oluzosetshenziswa kamuva kudivayisi enezinto ezisebenzayo uhlelo olwenziwe onjiniyela beGoogle.
Imininingwane engaphezulu nemininingwane: abafundiswayo
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Dala ulimi lwakho kumhumushi wekhodi ye-morse
Izindlela ezi-3 zokwakha ikhamera yokuhlola yamahhala